Okhiye bokwenza i-selfie ephelele | Izindaba zamagajethi
Lezi okhiye bokwenza i-selfie ephelele
Manje njengoba kufika uKhisimusi ngubani ongacishe athathe isithombe nabangane babo, umndeni noma ngisho nje kwamanye amakhulukhulu amakhona akhethekile, ahlotshiswe ngezinto zikaKhisimusi ezithandekayo, ezifihlwe emadolobheni. Ama-selfies ngokungangabazeki ayindlela ekhethwayo yokuqeda izikhathi ezikhethekile, yize ukuzenza zisezingeni elihle futhi zikhawulelana nokuphelela akwanele ukubeka nokudubula.
Futhi yilokho ukuthola i-selfie ephelele kuyathakazelisa ukulandela izinkinobho ezithile eziyisisekelo, ukuze ngokwesibonelo wonke umuntu aphume ekhanyisiwe, abekwe kahle esithombeni futhi ngaphandle kokuphazamisa isithombe esishiwo ngezinye zezinketho zekhamera engaphambili yedivayisi yethu yeselula, okufanele siyenze ingasebenzi. Uma ungakatholi i-selfie ephelele, ungakhathazeki ngoba bonke labo obathatha ngaleli Khisimusi bazoba ngabonga ngokuphelele okhiye namathiphu esizokunikeza wona namhlanje ngale ndatshana.
Okokuqala, isincomo sethu ukuthi une-smartphone yakho noma nekhamera eseduze, ukuze ukwazi ukuzama zonke izinkinobho esizokunikeza zona. Ungalindi ukuzama zonke izeluleko zethu ngoSuku lukaKhisimusi nalapho umndeni wakho wonke usuvele ulinde i-selfie ephelele, ngoba kungenzeka ungayitholi ngaphandle kokuzijwayeza kuqala.
1 Qaphela izinketho zekhamera yangaphambili ye-smartphone yakho
2 Ukukhanyisa kuyisihluthulelo
3 Hlonipha umthetho wezintathu
4 Izihlungi, ukwakheka okuhle kwe-selfie
5 Induku yeselfie, okusungulwe kahle ezikhathini zamuva
Qaphela izinketho zekhamera yangaphambili ye-smartphone yakho
Amakhamera wangaphambili ama-smartphones avame ukulayishwa ngezinketho, ezinye zazo zithakazelisa impela, ukuthola isithombe esihle. Ngeshwa ezinye zalezi zinketho aziyifezi ngokugcwele inhloso yazo futhi zingabhubhisa isifinyezo ebesizokhunjulwa.
Inketho engibona ngombono wami ukuthi kufanele usebenze njalo yaziwa njenge "Imodi yobuhle". Lokhu kunesibopho sokulungisa ngesikhathi sangempela ezinye izici zobuso zalabo abavela ku-selfie, kepha ezimweni eziningi lezi zilungiso zivela kokujwayelekile futhi zigcina ngokunikeza ukubukeka okungajwayelekile ebusweni balabo abasesithombeni. Uma ungayekisa ukusebenza, yenze futhi uma ingehliswe ibe sezingeni eliphansi ukuze ingabonakali njengomama osanda kusetshenzwa hhayi umuntu ojwayelekile.
Njengoba sesikutshelile, kungcono ukuthi uzame le "Nqubo Yobuhle" khona manje futhi ukuthi kwamanye ama-terminals yenza umsebenzi wayo wangempela futhi iyasiza kakhulu. Vele, okwamanje amakhamera amadivayisi eselula anemiphumela emihle le ndlela ekhethekile ibalwa ngeminwe yesandla.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sibone ukuthi imodeli eyaziwayo yabanjwa kanjani ku-Instagram ithatha i-selfie ephethe umakhalekhukhwini wayo ngesandla esisodwa nakwesinye isibani esinamandla amakhulu. Lesi sibani sasiboniswa esibukweni esasingemuva kwakhe futhi esasimvumela ukuba enze onke ama-selfies akhe acishe abe ngaphelele futhi kuzo angabonakala ngombala nokukhanyisa okwakumthanda kakhulu.
Ukuthatha noma yisiphi isithombe kubalulekile ukuthi kube khona ukukhanya nokuthi kusikhanyise ngangokunokwenzeka. Ukuthola i-selfie ephelele, ukukhanyisa kuyisihluthulelo futhi kubalulekile ukuthi kubhekiswe kithi. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuthatha isithombe ubheke indawo lapho ukukhanya kuhle khona.
Hlonipha umthetho wezintathu
Siyazi ukuthi wonke umuntu ukhuluma nge umthetho wokuthathu nokuthi utshelwe izikhathi eziyinkulungwane ukuthi awusebenzisi, ngaphandle kokuthi mhlawumbe wazi nokuthi kuyini. Ungakhathazeki, sizokuchazela ngendlela elula. Lo mthetho uthi kuyalulekwa lapho uthatha isithombe ukubeka inhloso enkulu ngakolunye uhlangothi hhayi enkabeni egcina isithombe sonke. Lokhu kudala umthelela omkhulu wesimo esinaso ngemuva.
Ngemuva kwalokho ungabona kulesi sithombe incazelo yomthetho wezintathu;
Ukwenza impilo ibe lula kancane, kunconywa ukuthi usebenzise igridi kudivayisi yakho yeselula, ukuze ivele esibukweni nokuthi ukuzibeka wena lapho uthatha i-selfie kulula ngandlela thile.
Izihlungi, ukwakheka okuhle kwe-selfie
I-Los filtros Kade baba khona emhlabeni wezithombe, kodwa sibonga i-Instagram babekwe njengesinye sezisetshenziswa ezinhle kakhulu zokuthinta okuhlukile ezithombeni futhi nokulungisa ezinye zazo. Ama-selfies athanda ukuba yizithombe ezikhohlisayo lapho ethathwe endaweni esondele kakhulu, ngakho-ke isihlungi esifanelekile singaba ukwakheka okuhle ukumboza nokulungisa ukukhubazeka noma izinkinga.
Uma ufuna ukuthola i-selfie ephelele, sebenzisa okokuhlunga, noma kunjalo, phika njalo ukuze wonke umuntu akholelwe ukuthi unesikhumba esifanele nokuthi ungumpetha weqiniso othatha ama-selfies.
Induku yeselfie, okusungulwe kahle ezikhathini zamuva
Kusukela ingene emakethe, kuthengiswe amakhulu ezinkulungwane zezinti ze-selfie emhlabeni wonke, ngenxa yokuba usizo kwazo namathuba ekunikezayo lapho ithatha i-selfie. Kulabo abangazi ukuthi kuyini, noma ngicabanga ukuthi akekho umuntu kuleli cala, Le nduku isetshenziselwa ukubeka idivayisi yethu ephathekayo ngakolunye uhlangothi futhi isebenze njengengalo yokuthatha i-selfie kude.
Lezi Ayikho imikhiqizo etholakele. Inamanani entengo ashibhile futhi ayisivumeli nje kuphela ukuthi sithathe ama-selfie ukusuka kude, ukuze, ngokwesibonelo, indawo ebonakalayo ibonakale, kepha futhi ukuze abantu abaningi bakwazi ukuphuma esithombeni ngaphandle kokuba nezingalo lokhu amamitha amaningana ubude.
Uma ungenayo le gajethi encane okwamanje, mhlawumbe kulo Khisimusi ungacela Amakhosi Amathathu noma uSanta Claus ngeyodwa.
Lezi izinkinobho ezi-5 nje ebesifuna ukukunika zona ukuze ukwazi ukuthatha i-selfie ephelele, kepha uma usenakho okunye singajabula uma wabelana nathi ngakho. Ungakwenza lokhu ngokusebenzisa isikhala esibekelwe ukuphawula kulokhu okuthunyelwe noma nganoma yimaphi amanethiwekhi omphakathi esikhona kuwo.
Ulungele ukuthola i-selfie ephelele kulo Khisimusi?.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Lezi okhiye bokwenza i-selfie ephelele
Amakhasi nezinhlelo zokusebenza zokwenza Ushintsho olungcono olubonakalayo